Ukuhlaziya Kanjani Ukusebenza kwe-SEO? Amathiphu ayi-6 avela kwizazi zeSemalt
Izinjini zokucinga ziyizilo ezingaqondakali. Bangabagcini besango abanamandla be-inthanethi, badinga ukuqiniseka ukuthi baletha kuphela imiphumela ephezulu kakhulu futhi efanelekile kubasebenzisi bayo, funa baphonswe eceleni ukuthola ezinye izinketho ezingcono.
Ukuze ulethe imiphumela yokusesha yekhwalithi enjalo, injini yokusesha idinga ukuthi iqinisekise ukuthi ama-algorithm ngqo awasebenzisayo ukusesha okuphezulu ahlala eyimfihlo eqashelwe kakhulu. Ngemuva kwakho konke, uma inhlangano beyazi kahle ifomula bangayixhaphaza ukukhuphuka amazinga.
Ohlangothini lwe-flipside, izinjini zokusesha kumele zinikeze amawebhusayithi inkomba yokuthi kuzobasiza kanjani ukuthi bahle kahle, uma kungenjalo, wonke umuntu uzobe egijima engaboni. Njengezinjini zokucinga eziyekethisa njengeGoogle, Yahoo! kanye ne-Bing bahlinzeka ngemihlahlandlela yokusetshenziswa kweinjini yokusesha (i-SEO) — uhlu lwezimfanelo wonke amawebhusayithi asezingeni eliphakeme abelana ngalo.
Futhi yilezi zimfanelo ezakha isisekelo sokuhlaziywa kwe-SEO.
Kungani ngidinga ukuhlaziya ukusebenza kwe-SEO yami?
Wakhe iwebhusayithi. Ulandela imigomo eyisisekelo yokusebenziseka kahle kwezinjini zokucinga. Uyishuthe isayithi lakho ku-ether. Kungani udinga ukuhlaziya ukusebenza kwe-SEO yakho?
Kunezizathu ezimbili eziyinhloko.
Okokuqala, ulwazi ngamandla. Impela, kungenzeka ukuthi wakhe iwebhusayithi yakho 'ngencwadi', kepha awazi ngempela ukuthi isebenza kahle kuze kube yilapho uyihlola ngempela. Kungenzeka ukuthi ulungiselele iwebhusayithi yakho cishe ngokuphelele, kepha izimbangi zakho zikwazile ukuzenzela kangcono okungcono, futhi usenomsebenzi okufanele wenziwe. Ngokuhlaziya ukusebenza kwe-SEO yakho ungakhomba izindawo ezibalulekile zokwenza ngcono, bese udlulela esedlule izimbangi zakho eziseleni.
Okwesibili, i- SEO isesimweni sezinguquko ezingaguquki. Ukuze uthuthukise njalo ikhwalithi yemiphumela yabo futhi uhlale wenza isinyathelo esisodwa ngaphambi kwamawebhusayithi, iGoogle, Yahoo! futhi i-Bing ihlala ilandisa ubuchule bayo. Lokhu kusho ukuthi okukuyise esicongweni serenke ngeledlule kungenzeka kungakutholi lapho kuleli sonto. Uma uqhathanisa izindlela ezinhle kakhulu zanamuhla zokulwa nemikhuba emihle kakhulu yeminyaka eyi-10 noma eyi-15 eyedlule, ushintsho luyinto enkulu. Lolu hlu lwayo yonke i-algorithm yokuvuselelwa kwe-Google yenzelwe ukufundwa okuhehayo.
Ukuhlaziya ukusebenza kwe-SEO yakho kuthuthukisa iwebhusayithi yakho futhi kukusiza ukuthi usabele ekushintsheni. Kubalulekile kunoma ngubani ofuna ukufika phezulu kwamazinga futhi uhlale lapho.
Ngakho-ke uyihlaziya kanjani i-SEO?
Izindlela eziyisi-6 ezibalulekile zokuhlaziya ukusebenza kwe-SEO yakho
Ukuhlaziywa okunenjongo kokusebenza kwakho kusekelwe ezimisweni eziyisithupha ezibalulekile ezihlala zihlala njalo ngomlando we-SEO-izici zakha umnyombo weSemalt Analytics. Ake sibheke ngamunye.
Ukuhlaziywa kwegama elingukhiye
Lapho umsebenzisi ethayipha igama noma umusho ku-Google, lokhu kuba amandla okuqhuba ngemuva kosesho. Impela, iGoogle ingakwazi ukuhlaziya indawo yomsebenzisi, noma iphrofayili yomuntu ngamunye abayakhile iminyaka edlule, kepha lolu lwazi luvele lungezela usawoti kanye nopelepu ekusesheni. Igama eliyisihluthulelo isitsha esikhulu.
Lapho i-Google ikhokha inetha layo ku-World Wide Web ifuna la magama angukhiye, ingabe iwebhusayithi yakho izobanjwa? Uyawazi wonke amagama asemqoka afanele iwebhusayithi yakho okufanele ayiveze imikhiqizo oyithengisayo kanye nomkhakha okuwo? Uma uyinkampani yezomthetho eLondon eLondon, ingabe uyaba ngumphumela 'wemithetho yomndeni eLondon'? Uma uyisitolo se-pizza eBrooklyn, ingabe ufaka umphumela 'we-pizza eBrooklyn'? Lezi yizibonelo eziyisisekelo kakhulu ukukhombisa umqondo; Ukuhlaziywa kwegama elingukhiye kweqiniso nokwenza kahle kakhulu.
Ukuhlaziywa kwegama elingukhiye kukhomba amagama okhiye okufanele ngabe ugxile kuwo nokuthi kufanele abekwe kuphi kuwebhusayithi yakho. Ukubeka amagama angukhiye ezindaweni ezibonakalayo eziphezulu njengezihloko kanye nemethadatha kuzoqinisekisa ukuthi izinjini zokucinga ziyazibona.
Ezinsukwini zokuqala zokusesha kwe-inthanethi, i-Google ibifuna indlela yokuqinisekisa ikhwalithi yemiphumela yabo. Bebeqonda ukuthi ngokuthembela ngokuphelele kumagama angukhiye bazobona ukugcotshwa kwamagama angamawebhusayithi ” -babeka amagama okhiye nomaphi lapho bebengathola khona esizeni sabo ukuze benyukele phezulu kwamazinga. Ngakho-ke beza nesixazululo esikhaliphile: bahlola izixhumanisi.
Ukucabanga kwabo kwakulula: ukuxhumana okuningi kusuka kwimithombo yangaphandle kuwebhusayithi, ikhwalithi ephezulu kakhulu leyo webhusayithi. Yisizathu sokuthi uhlala ubona iWikipedia phezulu kusesho — abayikhathaleli kakhulu ukwenziwa kwegama elingukhiye, kodwa njengokuphikisana nomthombo wolwazi othembeke kakhulu we-inthanethi, amanye amawebhusayithi axhumeka ku-Wikipedia ngaso sonke isikhathi, ekhulisa kakhulu ukuba semthethweni kwesayithi . Ukube ubungavele uqaphele, ngixhumeke ne-athikili yeWikipedia esigabeni ngenhla.
Ukwakha izixhumanisi kudlala indima ebalulekile ku-SEO. Ukuhlaziya izixhumanisi zewebhusayithi yakho, ngaphakathi nangaphandle, kubalulekile ekuqondeni ukuthi 'ihlonishwa' kanjani iwebhusayithi yakho ngezinjini zokucinga. Okuqukethwe kuvame ukubamba iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni ukusebenza kwesixhumanisi sakho, ngoba udinga ukunikeza amanye amawebhusayithi isizathu sangempela sokukuxhumanisa.
Yakhiwa kahle kangakanani iwebhusayithi yakho? Izinjini zokusesha zithumela 'abakhaseli bewebhu' abapheqa kalula i -inthanethi futhi bakhombise okuqukethwe kuyo. Ukuhlangana kalula kwabo lapho beqoqa khona imininingwane edingekayo kuyisici ku-SEO.
Cabanga ngakho njengohambo lokuthenga. Kumuntu okhamba webhu njengeGooglebot, iwebhusayithi eyakhiwe kahle izofana nokuphequlula isitolo esikhulu - konke kugcwele kahle, kufakwe ilebula ngokucacile, futhi kubekwe ngendlela okulula ukuyiqonda ngayo indlela. Iwebhusayithi eyakhiwe kabi ifana nokuthenga ethengiswa egalaji — akukho nhlangano, amalebula, nezinto eziyinqaba eziphonswe kwenye nenye indawo.
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi kugxile ekubuyiseleni kuwebhusayithi yakho. Kukusiza uqonde ukuthi umgwebi wewebhu angakwazi ukuhamba kalula isiza sakho ukuthola ulwazi oludingayo. Ibuye ikunikeze uhlu lokuthuthuka ongalenza ukuthuthukisa le ngqalasizinda.
Waziwa kangakanani, umugqa wakho owaziwayo, owaziwayo futhi othembekile, hhayi ngokubuka kwe-Google kuphela, kodwa emehlweni amakhasimende angaba nawo?
Ukuqashwa komkhiqizo okuphelele kunikeza ukubuka okuphelele kokubakhona kwakho kwe-inthanethi-akubheki kuwebhusayithi yakho kuphela, kepha kubukeza abahlanganisi abanjengo-Google, i-Facebook, i-Trustpilot ne-Glassdoor, futhi ihlaziya ukusebenza kwe-inthanethi kwakho konke komkhiqizo wakho. Kukusiza ukuthi uqonde ukuthi uhlobo lwakho lomkhiqizo lubukwa kanjani kusuka ngaphandle futhi libonisa izindlela ongaqhakambisa ngazo lowo mbono. Lokhu kukuqonda kusiza ukuthi wakhe inqubomgomo yokubambisana esebenza ngempumelelo.
Ithi uthola amaphuzu angama-70% esivivinyweni. Impela, kuyadlula, kepha umphumela awusho lukhulu uze wazi ukuthi bonke abanye benze kahle kanjani. Ngokufanayo, awazi ngempela ukuthi okushiwo ukuhlaziywa kwakho kwe-SEO uze uziqhathanise nabancintisana nabo.
Ukuhlaziywa komncintiswano kusetshenziswa amasu afanayo njeng angenhla ukuze uqonde ukuthi i-footprint yakho yedijithali ilinganisa kanjani nezimbangi zakho eziqondile. Kubheka ukuthi lezi zinkampani zibekwe kuphi njengamanje, nokuthi zenzani ukuze zifike lapho.
Ukuhlelwa kwamagama angukhiye
Futhi manje emcimbini omkhulu. Lapho usuqoqe konke lokhu kuhlaziya ndawonye, yisikhathi sokusebenzisa ulwazi lwakho. Umgomo wokugcina we-SEO ukuthola ukuthi iwebhusayithi yakho ibe sezingeni eliphakeme ezinjini zokusesha zamagama asemqoka, ngakho uma usuhlaziyile isici ngasinye esinegalelo, sekuyisikhathi sokuhlaziya imiphumela yemizamo yakho.
Ukuhlaziywa kwesikhundla segama elingukhiye okuhle kuzoba njalo (kuhle ukwenziwa nsuku zonke) futhi kubanzi. Izolanda isikhundla sakho ezinjini zokucinga eziningi, futhi ikunikeze nokuqonda okudingayo ukuze uthuthukise izinga lakho. Kuzozibonakalisa ukubalulekile ngokukuphokophela phezulu phezulu ngesikhathi.
Usebenzisa Semalt Analytics ukuhlola ukusebenza kwakho kwe-SEO
ISemalt Analytics iphawula wonke amabhokisi angenhla. Ithuluzi le-webmaster analytics analytics, lenzelwe ukukunikeza umbono ocacile ngesimo sakho samanje se-SEO futhi ukhiphe imininingwane engabekezeleleki ezokubona ukhuphuka amazinga wokucinga ngamagama aphambili afanele.
I-Semalt Analytics isebenza ngu:
Ukuqoqa idatha yewebhusayithi
Kwenziwa umbiko onemininingwane mayelana nesikhundla se-SEO sakho kanye nalabo oncintisana nabo
Ukunikeza uhlu lwamagama angukhiye azothuthukisa isayithi lakho futhi andise ithrafikhi
Ukusekela imizamo yakho ye-SEO ezinjini zokucinga ezihlanu ezihlukene
Ukuhlaziya ama-rankings ngesikhathi sangempela futhi ulethe umbiko we-SEO nsuku zonke
Ukunikeza umphathi wokuhlaziya umuntu ukuthi aqondise yonke inqubo
I-Semalt Analytics ikunikeza imininingwane. Lokho okwenzayo ngalolo lwazi kukuwe. Ungazenzela zona ngokwakho, noma uthintane nochwepheshe weSemalt SEO, ongakuqondisa ngokusebenzisa lolu lwazi olusha.
Ukusebenza kweinjini yokucinga kuyimpi eqhubekayo. Izibalo zamagoli zihlala zihamba, futhi izimbangi zakho zihlala zikufuna ukukuthola. Kepha ngokuqonda imithetho yomdlalo, nangokusebenzisa ithuluzi elihlakaniphile elikunika ithuba elihle lempumelelo, maningi amathuba okuthi uphume empini unqobile.
Ngakho-ke kungani ulinda? Kumahhala ukuqala ngeSemalt Analytics- ungangeza iwebhusayithi yakho ku-Pro Hlaziya njengamanje ngaphandle kokukhokha isenti, bese uthola ukuthi ibhizinisi lakho lingayifinyelela kanjani impumelelo ye-SEO.